युरोप, अमेरिका जान खोज्नेलाई नै धेरै फसाउँछन् दलालहरु
किरण भट्टराई काठमाडौँ । युरोप र अमेरिकामा रोजगारीको प्रलोभन देखाउँदै युवालाई ठग्नेहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाका अनुसार विदेश जान प्रवेशाज्ञा लाग्ने र त्यहाँ रोजगारीे सुनिश्चित हुने लगायतका..
​फ्री भिसा र टिकटको व्यवस्था फेर्ने खेल, न्यूनतम लागतमा पुनर्विचार गर्नुपर्छः सांसद जंगली
काठमाडौं। प्रहरीले ठगीको आरोपमा कारबाही सुरु गरेपछि म्यानपावर कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी यही बहानामा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकटको व्यवस्था संशोधनको भित्री खेलमा लागेका छन् । गत फागुन..
​काठमाडौं बसन्तपुरमा अँध्यारो हुँदा अटोमेटिक बल्ने सौर्य बत्ती जडान
काठमाडौं । सम्पदा क्षेत्रलाई पर्यटन पूर्वाधारमैत्री एवं आकर्षक बनाउन काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयले बसन्तपुर र आसपासका क्षेत्रमा ९२ वटा सौर्य बत्ती जडान गरेको छ। जुद्ध शालिकलाई केन्द्र बनाई यसको दायाँबायाँ सिद्धिचरण चोक,..
​सामान्य कामदार एउटा सानो आइडिया बने करोडौं सम्पतिको मालिक
सोलुखुम्बु । जिल्लाको तामाखानीका डिल्ली मगर पर्यटन भरियाका रुपमा करिब डेढ दशकअघि खुम्बु क्षेत्र पुगे । त्यहाँ पर्यटन भरिया, होटल कामदारलगायत मजदुरी गरेका शेर्पा अहिले स्याङ्बोचे विमानस्थल नजिक घर तथा..
​पुनर्निर्माणका लागि सरकारले माग्यो २६ सय बढि प्राविधिक कर्मचारी, क-कस्ले आवेदन दिन सक्छन् ?
काठमाडौं । भूकम्पका कारण क्षति भएका घर पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन सरकारले इन्जिनियर सहित झण्डै २६ सय जना प्राविधिक जनशक्ति माग गरेको छ। आजको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवास, वस्ती विकास, सार्वजनिक..
खप्तड घुम्न जानेका लागि १५ हजार रुपैयाको ‘टुर प्याकेज’
कञ्चनपुर। खप्तड घुम्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ रु धेरै रकम खर्च होला भन्ने भ्रममा हुनुहुन्छ भने त्यसबाट मुक्त हुनुस् । खप्तडका जान १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्दा पर्याप्त हुने गरी टुर..
​दुग्ध विकास संस्थानमा ७४ जनाको लागि जागिर खुल्यो
काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थानले ७४ जना कर्मचारीको माग गरेको छ। संस्थानले विभिन्न आयोजनाहरुमा रिक्त रहेका अधिकृत स्तरका १६ जना सहायक स्तरका ५८ जना गरी जम्मा ७४ जना कर्मचारीको माग..
​आजदेखि राजधानीमा अत्याधुनिक ३९ वटा मेट्रो बस संचालन गरिने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि सुविधासम्पन्न मेट्रो बस चल्ने भएका छन्। १६ करोडको लगानीमा महानगर यातायात प्रालिले ३९ वटा बस आजदेखि संचालनमा ल्याउन लागेको हो । काठमाडौंको बनस्थलीमा दिउँसो २ बजे..
​विद्युतीय बसका लागि भौगोलिक अध्ययन सम्पन्न, अब चाँडै चीनबाट बस ल्याइने
काठमाडौं । चीनबाट ल्याउने तयारीमा रहेको अपाङ्गमैत्री विद्युतीय बस ९इ–बस० का लागि काठमाडौँ उपत्यकाको भौगोलिक अध्ययन सकिएको छ । तर पूर्णरुपमा अध्ययन प्रतिवेदन आउन बाँकी छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ल्याउन लागेको..
​४६ जना इन्स्पेक्टर डिएसपिमा बढुवाको सिफारिस (नामावली सहित)
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ४६ जना प्रहरी निरीक्षक(इन्स्पेक्टर) हरु बढुवाको सिफारिसमा परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको बढुवा समितिको सचिवालयले उनीहरुलाई प्रहरी नायव उपरीक्षक(डीएसपी)मा बढुवाको सिफारिस गरेको हो । बढुवा समितिका..
​हिमालय एयरलाइन्सको पहिलो एयरबस नेपाल भित्रियो
काठमाडौं । निजी वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सले आफ्नो पहिलो एयरबस नेपाल आइपुगेको छ । तिब्बत एयरलाइन्ससँग सहकार्य गरेर हिमालयले नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदान गर्न लागेको हो । चैत ३० गतेदेखि..
​धन कमाउने सपना बोकेर साउदी पुगेका कामदार पारिश्रमिक नपाई स्वदेश फर्कन बाध्य
साउदी अरब । धन कमाउने सपना बोकेर रोजगारीका लागि साउदी अरब आएका २१ नेपाली कामदार खालीहात स्वदेश फर्कन बाध्य भएका छन्। रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक नदिएपछि ती नेपाली कामदार खालीहात स्वदेश फर्कन..
​अब गँगबु नयाँ बसपार्क यस्तो बन्नेछ
काठमाडौँ । नयाँ बसपार्कलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न एवम् आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ। समृद्ध महानगर निर्माणमा ठूला तथा आधुनिक संरचना निर्माणको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालि र..
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १ सय १० अधिकृतका लागि जागिर खुल्यो
काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले करार सेवामा नियुक्त गर्ने गरी विभिन्न किसिमका प्राविधिक अधिकृत पदमा दरखास्त आह्वान गरेको छ । विभिन्न प्राविधिक पदहरुमा १ सय १० जना अधिकृतहरुको माग भएको हो । मन्त्रालयले..
​रत्न मगरको नेतृत्वमा एकसोडस ट्रेकिङ एण्ड एक्पिडिसन
काठमाडौ । प्रतिस्ठानस्तरको ट्रेड यूनियन एकसोडस ट्रेकिङ एण्ड एक्सपिडिसन प्रालिको चौथो अधिवेशनले रन्तबहादुर मगरको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । बुधबार सम्पन्न अधिवेशनले उपाध्यक्षमा पेमा नुरु शेर्पा, सचिवमा ङिमा शेर्पा,..
साउदीमा नेपालीको पीडाः काम छैन, मागेरै बाँचेका छौं
साउदी अरब । म्यानपावर कम्पनीको प्रलोभनमा परी रोजगारीका लागि साउदी अरब आएका १० नेपाली कामदार विचल्लीमा परेका छन् । काठमाडौं थापागाँउस्थित ‘अल नसिर ओभरसिज प्रालि’मार्फत् साउदीको ‘अम्जाद फइज अल ओटाबी स्टाबिलीस्ट..
​नेपालका लागि जारी गरेको ट्राभल एडभाईजरी अमेरिकाद्वारा खारेज
काठमाडौं । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नेपालसम्बन्धी ट्राभल एडभाईजरी खारेज गरेको छ। विदेश मन्त्रालयले सोमबार चेतावनी खारेज गरेको जनाएको छ। अमेरिकाले २०७२ असोज २१ मा भ्रमण चेतावनी जारी गरेको थियो। भूकम्पपछिको..
फेवातालमा ७ प्याराग्लाइडर्स पाइलटसहित खसे
पोखरा। पोखरामा चलिरहेको प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिताका प्रतिश्पर्धी पाइलट दुर्घटनामा परेका छन्। पाइलट सहित उडिरहेका ८ वटा ग्लाइडर दुर्घटनामा परेका हुन्। ती मध्ये ७ वटा फेवातालमा खसेका छन् भने एउटा अर्मलामा रुखमा..
ग्रामीण पर्यटनको दरिलो आधार मानिने होमस्टे प्रचारप्रसारको कमीले फष्टाएन
सिबी अधिकारी काठमाडौँ । ग्रामीण पर्यटनको दरिलो आधार मानिने होमस्टे (घरबास) कार्यक्रमको व्यावसायिक सम्भावना रहे पनि उचित व्यवस्थापन तथा प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको आकर्षण बनेको..
​आन्तरिक पर्यटनको आकर्षण बन्दै हुडिकोट हाइकिङ
वासुदेव पौडेल पोखरा । विश्वमै ख्याति कमाएको नेपालको पर्यटकीयस्थल पोखराको दक्षिणभेग लेखनाथ नगरपालिका वडा नं १८ स्थित हुडिकोट हाइकिङका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ । माछापुच्छ, अन्नपूर्ण, धौलागिरि लगायतका हिमशृङ्खला तथा..
​इपिएसमा दरखास्त दिन ‘एमआरपी’ अनिवार्य
काठमाडौँ । रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जानका लागि रोजगार अनुमति प्रणाली ९इपिएस० भाषा परीक्षाको दरखास्त फारम भर्न यो वर्षदेखि मेसिनले पढ्ने राहदानी (एमआरपी) अनिवार्य बनाइएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको इपिएस..
​विद्युत प्राधिकरणले माग्यो ५०३ जना कर्मचारी
काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आजको गोरखा पत्रमा निकाली विभिन्न पदमा पाँचसय तीनजना कर्मचारी माग गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले सहायकतस्तर तृतीय श्रेणीदेखि अधिकृत दशौं श्रेणीसम्म कर्मचारी माग गरेको हो। प्राधिकरणले प्रशासन र..
मलेसिया सरकरले विदेशी कामदार लैजान बन्द गर्यो, नेपालका म्यानपावर अप्ठ्यारोमा
काठमाडौं । मलेसिया सरकरले आफ्नो मुलुकमा नयाँ विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिन बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । मलेसियाका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री अहमद जाहिद हमिदीले धेरै कामदार रहेका नेपाल र बंगलादेशसिहत सबै..
​ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निगमकै जिम्मामा
काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा नेपाल वायुसेवालाई नै दिने तयारी गरेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमबीचको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवासम्बन्धी सम्झौता गत..
​शाखा अधिकृतको परीक्षाको नतिजा आयो, नामावली सहित
काठमाडौ, – लोक सेवा आयोगले शाखा अधिकृत पदको लागि लिएको पहिलो चरणको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक नतिजाअनुसार देशभरीबाट ४ हजार २ सय ६६ जना उत्तिर्ण भएका छन्..
बिमान भाडा आन्तरिकतर्फ ६ सयदेखि २१ सय रुपैयाँसम्म घट्यो
काठमाडौं । भोलिदेखि आन्तरिक उडानतर्फको बिमान भाडा घट्ने भएको छ । बायुसेवा सञ्चालक संघले देशका विभिन्न गन्तब्यमा पुग्दा लाग्ने भाडमा ६ सय रुपैयाँदेखि २१ सय रुपैयाँसम्म भाडा घटाएको हो । आयल..
​‘अन टेस्ट’ लेखेर यात्रु बोक्नेलाई कारबाही
काठमाडौँ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ विपरीत ‘अन टेस्ट’ अर्थात ‘परीक्षणमा’ रहेका सवारी साधनले यात्रु बोकेर हिँड्ने क्रम बढेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा तोकिएभन्दा बढी भाडा लिए ÷नलिएको..
​ कम्पनीले पारिश्रमिक नदिदाँ कामदारको बिचल्ली
साउदी अरब । रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक नदिँदा रोजगारीका लागि साउदी अरब आएका २१ जना नेपाली बिचल्लीमा परेका छन् । दमामस्थित अलसत्रायन कन्ट्रयाक्टीङ कम्पनीमा कार्यरत ती नेपाली कामदारले आठ महिनाको पारिश्रमिक पाएका..
​सोल्टी होटेलको खुद नाफामा ७७ प्रतिशतले गिरावट, प्रतिशेयर आम्दानी ६३ पैसा मात्रै
काठमाडौं । सोल्टी होटेलको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफामा ७७ प्रतिशत भन्दा बढीको गिरावट आएको छ । उत्पादन समुहमा सुचिकृत कम्पनीहरुको नाफामा भुकम्प र त्यस पछिको लामो समयसम्मको..
​कोरिया भाषा परीक्षा भदौमा, घरैबाट अनलाईन मार्फत आवेदन गर्न सकिने
काठमाडौं । सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)अन्तर्गत दक्षिण कोरिया जान लिइने भाषा परीक्षा (पीबीटी) भदौमा गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार ईपीएस कोरिया शाखामा बसेको बैठकले सातौं भाषा परीक्षाको मिति..
Results 845: You are at page 22 of 29